Ukungcola esikhunjeni sakho - Kukuthinta kanjani? | Bezzia
Ukungcola esikhunjeni sakho: Kusithinta kanjani?
USusana godoy | 09/05/2022 10:00 | Ubuhle
Sihlale sigcizelela ukuthi kufanele sigcine ukunakekelwa kwesikhumba okuhle. Ngoba kunezici eziningi ezingalimaza futhi yebo, ukungcola esikhumbeni sakho Ngomunye wabo. Yize kumele sicacise ukuthi akuthinti isikhumba kuphela kodwa kungaphazamisa nomzimba, ikakhulukazi amaphaphu.
Kodwa mhlawumbe lokho sekuvele kukhuluma ngezinto ezinkulu futhi sizogxila ekutheni yikuphi ukungcola okungashiya esikhumbeni sakho, okuyinto engencane. Njengoba ezinye ze imiphumela yakhona ingavezwa ngokushesha okukhulu noma ngokusobala nakwabanye ngokuhamba kwesikhathi. Thola ukuthi konke lokhu kusithinta kanjani isikhumba sakho esithambile!
1 Yehlisa ama-antioxidants esikhumba
2 kubangela ukoma
3 ama-acne amaningi
4 Ukubukeka kwemibimbi
5 Ukucasuka okwengeziwe noma isikhumba se-rosacea
Yehlisa ama-antioxidants esikhumba
Uma sikhuluma ngokungcola esikhumbeni sakho, siphinde sikhulume ngakho amagesi afika ezimotweni, kanye nothuli noma umoya ngokwawo. Ngakho zifinyelela esikhunjeni sethu ngendlela eqondile futhi lokhu kungabangela ukuthi ama-antioxidants ayo ehle.. Phakathi kwazo sigqamisa uvithamini C noma E. Okubili kokubalulekile okubalulekile. Njengoba eyokuqala ithatha ukunakekelwa okuphezulu kwayo, ukuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi, ngaphandle kokukhohlwa ukuthi kubalulekile futhi ukukhiqiza i-collagen. Ngenkathi okwesibili kubamba ama-radicals mahhala okuyimbangela yomonakalo esikhumbeni sethu. Ngakho uma iyindlala, khona-ke kuvame kakhulu ukuthi isikhumba sethu sihlupheke. Manje sesikuqonda kakhudlwana!
Impela ngesinye isikhathi ukubonile futhi awazi kahle ukuthi bekubangelwa yini. Yebo, kufanele sikhulume ngeqiniso lokuthi, njengomthetho ojwayelekile, ukungcola esikhumbeni sakho kungabonakala ngokoma kwaso. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuhlanza ubuso kahle ekuseni nakusihlwa. Kusukela ekuhlanzeni okushiwo, sizosebenzisa ukhilimu omuhle wokuthambisa. Ukuze sikwazi ukubona ukuthi ukunwebeka kuphinde kube khona ebusweni bethu. Kunjalo ngaphezu kwamakhilimu ngokwawo, akukho lutho olufana nokukhetha amakhambi emvelo noma asekhaya. Lapho izithako ezinjengoju, ukwatapheya noma ubhanana zizoba khona, ngoba zonke zinezela i-hydration eyengeziwe, okuyilokho esikudingayo.
Nakuba kuyiqiniso ukuthi ukoma kungenye yezinkinga zokungcola esikhumbeni sakho, ngezinye izikhathi kungase kube nokwanda kwe-sebum. Ngakho-ke, lokhu kwanda kuzodala ukungcola okuningi kuma-pores futhi ngaleyo ndlela, kuzoholela ekubukeni kwama-pimples. Ngakho futhi kufanele sisho ukuthi ukunakekelwa kwesikhumba kuyinto eyisisekelo kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele sengeze ukuthi kanye ngesonto, udinga ukwenza i-exfoliation, ngoba ngale ndlela, sizovalelisa kumaseli afile.
Ngokuqinisekile ungase uqagele kakade, ngoba ngempela lapho sikhuluma ngokoma okubangelwa ukungcola, kanye nokuncipha kwamavithamini, sinemibimbi ngenxa yalokho. Isikhumba sizoqina kakhulu ngakho-ke, imigqa yokukhuluma izonikeza imibimbi ephawulwe kakhulu. Ukuze senze lokhu, kufanele sibavimbele ngokusebenzisa ukhilimu wosuku noma i-serum enesibopho sokubuyisela ukukhanya ebusweni bethu futhi-ke, ukuthambile.
Ukucasuka okwengeziwe noma isikhumba se-rosacea
Kulokhu, kufanele kushiwo ukuthi i-rosacea ingaba nezimbangela ezihlukahlukene, kodwa phakathi kwazo zonke, ukungcola nakho kungenye yezinto eziyinhloko. Lobo bubomvu obungavela ebusweni bonke bubangelwa ilanga, umoya noma umswakama. Geza ubuso bakho kahle kodwa ungasebenzisi insipho noma amanzi abandayo kakhulu noma ashisa kakhulu. Ukuvikelwa kwelanga kungenye yokhilimu okufanele uyicabangele nsuku zonke. Manje sesiyazi ukuthi ukungcola kusithinta kanjani isikhumba sakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ukungcola esikhunjeni sakho: Kusithinta kanjani?
I-reflux ye-gastroesophageal, yikuphi ukudla okufanele ukugweme
Faka imibala egqamile nesemfashinini engutsheni yakho